Manchester United oo 3 weerara midkood ku lamaanin doonto Lukaku sababta?
Wednesday, December 19th, 2018 - 05:57:06
Saturday January 13, 2018 - 00:46:48 in Wararka by Ak Caqil
Manchester United ayaa bartilmaameed ka dhiganeeyso Jamie Vardy iyo Javier Hernandez [Chicharito] midkood si ay badal ugu noqdaan Zlatan Ibrahimovic oo laga yaabo inuu u wareego horyaalka MLS ee Mareeykanka bishaan inta lagu gudajiro waxaana laga xiganayaa The Telegraph in Zlatan uusan noqon sidii laga sugaaye kadib dhaawaca soo gaaray.
Vardy ayaa noqon doono dooq qaali ah isla markaasna da’a weyn waloow uu Kooxda ku soo kordhin karo xawaare sare maadama uu ka duwan yahay Lukaku hab ciyaareedka taas oo awood galin karto weerarka Manchester United markaan.
Leicester City ayaa dooneeyso inay ugu yaraan ku helaan £35M oo gini xiddigaan waxaana ay laacibkaan hore ugu diideen Arsenal ka hor intuusan saxiixin heshiish cusub oo garoonka King Power ku celinaayo ilaa 2022-ka.
Laacibka West Ham ee Hernandez Chicharito ayaa dib ugu soo laaban karo Old Trafford mar kale kadib markii uu David Moyes oo markii horeba aysan isku wanaagsaneen laga dhigay macalinka West Ham kadib ceerintii Slavan Blic oo Hernandez ku soo iibsaday £17M oo gini waxaana ay West Ham dooneeysaa inay lacagtaas oo kale ku helaan laacibkii hore ee Bayern Leverkusen waloow la xasuusto in sanadkii 2015-kii ay Manchester United ku iibisay kaliyah £7.5M oo gini.